लघुकथा : रिप कुमार
डा मित्र पाठक “काँचुली”
मापसे (मादक पदर्थ सेवन) गर्न हुन्न भन्ने पनि थाहा थियो तर साथी साथीको भेटमा चाडबाडको बेला मज्जैले पिए दुवै जनाले । गाडीमा बसे । एउटाले कुदायो, अर्को झ्याल खोलेर हावा खाएर मख्ख पर्‍यो । होस धेरै गुमेको थियो,गाडीले थप गति लियो । केही बेरमै उनिहरु चढेको गाडी अगाडिबाट आएको अर्को ठुलो गाडीको टाङमुनी छिर्यो ।
दुई जनाकै इह लीला समाप्त । यमराज तुरुन्त हाजिर ! होस गुम्ने गरेर पिएर गाडी दुर्घटना भएकोले दुवै जनालाई नर्कमा हाजिर गराइयो । त्यहा पुगे पछी पनि दुई जना पियक्कडहरुको अर्को पर्तिस्पर्धा – फेसबूकमा कस्को धेरै रेस्ट इन पिस (रिप), लाइक र अरु कमेन्ट भनेर । सो स्याड, मिस यू फ्रेन्ड अनि रिप बराबर जस्तो भए पछि लाइक गन्न थालियो ।
अन्तमा त्यो साँझ भट्टी छिराउनेले भन्यो – ” हेर साथी ! जे भए पनि पिउदाको त्यो रातको सबै स्पोन्सर म नै हुँँ । मानवताको इमान्दारिताको हिसाबले वा साथीको नाताले पनि म नै माथि हुनुपर्छ । बरु मिल्छ भने तैले फेस्बूक खोलेर भए पनि एउटा लाइक चाँही थप्दी हाल ।” अर्को अक्क न बक्क हुँदै भन्यो – “चुप लाग रिप कुमार ! तलाई अझै रक्सिले छोडेको छैन रहेछ ।”
(चाडबाडको बेला साथी साथीको लहडमा लागेर धेरै पिएर अकालमै रिप कुमार नबनौँ – सबैलाई बडा दशैको लाख लाख शुभकामना)